Uchwepheshe we-Semalt ucacisa i-A1 Yewebhusayithi Yesikhulumi
Amawebhusayithi okudweba ahlanganisa ukuqoqa noma ukuvuna ulwazi lewebhusayithi kwisitoreji sendawo yesitoreji. Kungenzeka ukuthi uqoqe idatha kusuka kusayithi bese ulondoloza endaweni yendawo usebenzisa i-A1 website URL scraper. Ungakwazi ukuxuba uphinde ulethe ndawonye izinto ezahlukene zewebhusayithi yolwazi ukwenza umkhiqizo ohleliwe wokugcina idatha. Ukwengeza, ungakwazi ukuhlunga ama-URL ukuze uqoqe idatha futhi udale i-CSV kanye namafayela we-SQL. Ungathumela lolu lwazi kumshayeli wendawo noma ulondoloze ku-database njengama-database e-SQL - jgear returns amazon.
Lesi siqondiso se-SEO sinamathiphu abalulekile ekusebenziseni i-website ye-URL ihlubule ngempumelelo.
Ukuze uqalise, udinga ukulanda nokufaka ithuluzi le-URL le-A scraper ye-website ye-A1. Le software isebenza ku-Windows OS njenge-Windows 10/8/7 / Vista / XP / 2008/2003 nezinhlelo ze-Mac OS njenge-MacOS / OS X - Yosemite noma entsha. Leli thuluzi:
Linesayizi yefayela lokulanda engu-6.09MB kuphela.
Inguqulo ye-8.x ayidingi noma yiziphi izindleko zokubhalisa.
Kukhona isikhathi sokuhlolwa esisebenza ngokugcwele kwezinsuku ezingu-30 ukuhlola ukusebenza kwayo.
Intengo: $ 0 for the version mahhala kanye $ 49 for the version professional.
Kukhona ukusekelwa komkhiqizo wamahhala ngaphambi nangemva kokuthenga..
Esinye isici esibucayi ne-A1 website URL scraper yukuthi lokhu kuthenga kuhlanganisa zonke izinguqulo ezingu-8.x phambili. Ngaphezu kwalokho, abantu bangakwazi ukuthuthukisa ku-9.x version nganoma isiphi isikhathi lapho kukhishwa ngaphambi kwesikhathi se-1r.
Ukukhipha idatha yewebhusayithi nge-URL ye-URL scraper
Umshini wokukhwabanisa angakwazi ukwenza imisebenzi eminingi enenzuzo ku-intanethi. Lezi zenzo zihlanganisa ukukhipha nokufaka idatha kusuka emithonjeni efana namawebhusayithi okuhamba, amahotela, amasheya nesimo sezulu. Abantu bangakwazi futhi ukuhlanganisa idatha ye-website ekhishwe ngezinhlelo ezihlukahlukene zokuhlaziywa kwedatha namathuluzi. Abantu bangakwazi ukuthatha izinto zokusungula kusuka kwenye iwebhusayithi futhi bazigcine ngefomethi ehambisana nedatha yakho yomdabu.
I-URL ye-website ye-scraper yi-spider web standard. Uma ukhwela, ingakwazi ukwenza imisebenzi eminingi efana nokuhlunga ama-URL. Ungakwazi ukulawula ijubane lokukhahlela ukuze ukwazi ukuthutha zonke izidingo zakho ezibalulekile kubandakanya umthwalo webhusayithi.
I-A1 scraper ifaka izinkulumo eziningi ezijwayelekile ezingafanisa uhlobo lwedatha oyifunayo. Kukhona namathuluzi angasebenzisa umsebenzisi okusiza ekuqinisekiseni indlela idatha elawulwa ngayo. Ungakwazi ukwakha izinkulumo ezivamile ezidingekayo ngolwazi olufunayo.
Ekuphetheni, iwebhusayithi ye-A1 URL scraper ingakwazi ukulanda ulwazi lwewebhusayithi kwifomethi oyifunayo. Kunamafomethi amaningi ongakwazi ukukhipha idatha kusuka ku-URL scraper. Ngokuyinhloko, ungathola idatha emafomu afana ne-CSV noma amafayela we-SQL. Ukulungiselelwa kokuzenzakalela kungenzeka. Ungakwazi ukusetha uhlelo lokuhlunga lokuqoqwa kwedatha yakho. Ngesilingo samahhala sezinsuku ezingu-30, ungaba ukulungele ukukhipha idatha kumawebhusayithi afana namawebhusayithi wezindaba.